Inhloko ZeNdaba Ncwabakazi 2, 2021
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda kulandela inyathelo leZinwa lokuvalela umanisipala walelidolobo amanzi ngenxa yesikwelede sezigidi eziphose zifike ezimbili zamadola($193.2 million) somthelo wamanzi.Lokhu kuza ngesikhathi lelidolobho lilwisana lokumemetheka kwegciwane leCoronavirus, izakhamizi zesisebenzisa amanzi alengcekeza okulakho ukudala eminye imikhuhlane.
Kuphetha usuku lwayizolo inani lababulewe yiCovid 19 e Zimbabwe beselikumatshumi amahlanu lanye(51), abangamakhulu ayisithupha lamatshumi athoba minwemibili lasithupha(686) batholakala belegcikwane leli. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gcikwane bebe sebephezu kwesigidi lengxenye (1,654,112), kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephose bafike inkulungwane ezithoba minwemibili(779,229).
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kuhlangothi olubona ngezempilakahle, abeWorld Health Organization sebekhuthaze uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela iCovid-19 akhona elizweni ngoba kungadala ingozi emzimbeni kulabo abacabangela ukuba bengahlaba amajekiseni ahlukeneyo bazavikeleka ngamandla kuleli gcikwane.
Inhlanganiso yabaqeqetshi bomdlalo wenguqu ikhuthaza bonke abaphathelane lalumdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni elokuzivikela emkhuhlaneni we Covid - 19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni.